Kordhinta Shaashadda Labaad | Martech Zone
Kor u kaca shaashadda labaad
Axad, Nofeembar, 4, 2012 Sabti, Noofembar 3, 2012 Douglas Karr
Waxaan wax ka qornay mustaqbalka Telefishanka Bulshada, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in shaashadii labaad ay durbadiiba taallo. Marka aan banaanka u baxo filimada, marka telefishankeyga uu daaran yahay guriga, marwalba waxaan heystaa laptop, kaniini ama iphonekeyga diyaar. Shaashad labaad ayaa aniga dabiici ii ah… waxayna noqotay mid guud u ah dadka kale, sidoo kale!
Wax ka beddelka Xayeysiisyada Telefishanka iyo Meelaynta Alaabta
Sidee tani u beddelaysaa sida aan u suuq geyno? Waa hagaag mid, shirkadaha wax ka xayaysiiya telefishanka waa inay is dhex galiyaan xeeladaha khadka tooska ah. Dhisida si sahlan oo loo helo bogag degitaan oo sahlan in lagu isticmaalo aaladda mobilada ama kaniiniga ayaa muhiim ah. Xayeysiiskaagu waa inuusan si fudud kuheysan twitter-ka astaanta Facebook, waa inuu lahaadaa bog soo degitaan oo si ula kac ah halkaas loogu dhigo kuwa goobjoogayaasha ah. Waxaan soo jeedin karaa inaad haysato dariiqa / tv-ga bartaada oo leh qaab qaabeysan oo si fudud loo wareejiyay oo leh far waaweyn iyo meelo fara badan oo fara badan oo isticmaaluhu ku shaqeynayo.
Ha la yaabin waxa hareeraha geeska ka jira oo leh teknoolojiyada faro-qaadista codka. Codsiyada loogu talagalay moobilkaaga ama aaladda kiniinkaaga ayaa goor dhow noqon doona wax caadi ah oo og Goorma waxaad daawaneysaa barnaamij telefishan oo gaar ah ama lagu muujiyey ganacsi. Qiyaas codsi macno ahaan kuu siinaya xiriiriyeyaal iyo dalabyo marka aad daawato… lagu waafajinayo kiniinkaaga haddii aad si toos ah u daawaneysid ama u fiirsaneysid show horay loo duubay.
Beddelidda Aqoonsiga Isticmaalaha iyo Habdhaqanka Websaydhka
Shirkadaha aan ka xayaysiinayn telefishanka, waxay ka dhigan tahay in - in ka badan abid - ay fure u tahay in la helo degello mobiil ah oo la hagaajiyay, codsiyo iyo bogag si fiican loo habeeyay oo si fudud looga helo raadinta. Waxaan rumeysanahay in shaashadda labaad ay saameyn weyn ku leedahay garashada isticmaalaha markay timaado daawashada boggagaaga. Isticmaalayaashu waa hawlo badan, fiiro gaar ah ayaa loo sii leeyahay. Xeerkii hore ee labaad ee 2aad ee ahaa fiirinta bogga internetka iyo fahamka waxa ku saabsan wuxuu u badan yahay inuu ku yaraado hal ilbiriqsi.
Ka faa'iideysiga barnaamijyada is-dhexgalka iyo daabacaadaha dhijitaalka ah si loo kordhiyo waqtiga goobta iyo isdhexgalka ayaa muhiim ah. Kordhinta shaashadda labaad waxay sii wadi doontaa inay bedesho dabeecadaha isticmaalaha… waxqabad hadda!
Tags: sawirka farahashaashadda labaadtelefishanka bulshadatv ga bulshadasocialtv
Buugga Ciyaaraha ee Isku Xidhitaanka
Wadada Suuqgeynta Casriga ah
Nov 5, 2012 saacadu markay tahay 1:04 PM
Waxaan u maleynayaa inaysan waqti dheer qaadan doonin illaa aan aragno TV-ga iyo Internet-ka oo gebi ahaanba isku milmay (isla sidaas ayaa ka dhici doonta idaacadaha)